ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး HRW စိုးရိမ်
ကျော်သိင်္ခ (VOA) ၊ 31.01.2013
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေ့ဆက်သွားနေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေအပေါ်မှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ HRW လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကြီးက ပြောလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ရုပ်သိမ်းသွားစေရုံလောက်ပဲလုပ်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအဖြစ်မြင်တယ်လို့ HRW ရဲ့ အာရှဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူက VOA မြန်မာပိုင်းကို ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဆိုင်ရာ HRW ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ HRW ကို ကိုကျော်သိင်္ခက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတယ်ဆိုတော့ အကြောင်းစုံကိုသိအောင် ပြောပြပေးပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေဟာ နိမ့်ကျနေဆဲပဲလို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် HRW လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကြီးက ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာပြည် အရှေ့ဘက်ခြမ်းက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးနောက်၊ အဲဒီဒေသတွေက မြန်မာအစိုးရတပ်တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေအကြား တိုက်ခိုက်မှုတွေ လျော့ပါးသွားခဲ့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ မြန်မာအစိုးရတပ်တွေနဲ့ KIA တပ်တွေအကြား တိုက်ပွဲတွေက ဆက်ပြီ်း ပြင်းထန်နေဆဲပဲလို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့ နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဒုက္ခသည်တွေဆီ သွားရောက်ကူညီခွင့်ကိုလည်း မြန်မာအစိုးရဘက်က ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့လည်း HRW လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ရဲ့ အာရှရေးရာတာဝန်ရှိသူ John Fifton က ပြောပါတယ်။
“ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေအပေါ် တုံပြန်ဖြေရှင်းတာ၊ ကချင်အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ တိုးမြှင့်ဖို့၊ အဲဒီဒေသတွေမှာရှိတဲ့ ဒေသခံတွေဆီကို ကြက်ခြေနီအဖွဲ့တွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး ဖွင့်ခွင့်ပြုဖို့ အကူအညီပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေက လက်တွေ့ဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်တုန်းက သမ္မတ အိုဘားမား မြန်မာပြည်ကို သွားတုန်းက မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆက်ပြီးလုပ်သွားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့လုပ်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံတကာရဲ့ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ရုပ်သိမ်းသွားစေရုံလောက်ပဲလုပ်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ တကယ်လုပ်ရမယ့်ဟာကို အပြီးတိုင်လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ၊ မြန်မာအစိုးရမှာ ရှိပုံမရပါဘူး။ ရှေ့ဆက်သွားနေတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ စိုးရိမ်မိပါတယ်”
HRW လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ရဲ့ အာရှဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ မစ္စတာ John Fifton ပြောသွားတာပါ။ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ကချင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြား တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ ဘေးလွတ်ရာကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ ဒုက္ခသည်အရေအတွက်ဟာ ခန့်မှန်းခြေ ၉ သောင်းလောက် ရှိတယ်လို့ HRW လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ရဲ့ အစီအရင်ခံစာက ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ ဒုက္ခသည်အရေအတွက်ဟာ ၅ သိန်းခွဲကျော် ရှိတယ်လို့ HRW ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ရှိလာပေမယ့်လို့၊ မီဒီယာတွေအပေါ် တင်းကျပ်တဲ့ ဥပဒေတွေရှိနေတုန်းပဲလို့ HRW အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့လည်း မစ္စတာ John Fifton က …
“ပြဿနာတွေက ရှိနေတုန်းပါ။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာကို ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ ပုဒ်မတပ်ပြီး တရားစွဲနိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေလည်း ရှိနေတုန်းပါ။ တရားမ၀င်အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေတွေ ဆိုတာလည်း ရှိတုန်းပါ။ ပြီးတော့ အရေးပေါ် အက်ဥပဒေတွေ၊ အဲဒါတွေအားလုံးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်နေတယ်လို့ အစိုးရက ပြောနေပေမယ့်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကို မကြာခဏဆိုသလို ဖမ်းဆီးမှုတွေ လုပ်နေတုန်းပါ။ ဒါတွေက တကယ့်ပြဿနာတွေပါ”
မြန်မာနိုင်ငံထဲက ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေ၊ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး အားနည်းချက်တွေကို HRW ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ထောက်ပြထားပေမယ့်၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံအင်အားစုတွေကို ပြည်တွင်းထဲကို ပြန်လာခွင့်ပြုခဲ့တာတွေ၊ နိုင်ငံရေးကျဉ်းသား ၄၀၀ နီးပါးကို သမ္မတရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်ပြီးလွှတ်ပေးခဲ့တာတွေကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေထဲက တိုးတက်မှုအဖြစ်နဲ့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ထောင်ထဲမှာ ရာနဲ့ချီပြီး ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းလည်း HRW ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
I want to be True Leader Of Myanmar ! !
Where is True Follower Of Myanmar ?
Where are the changes in "BURMA",not at all.Only changes is the Generals can withdraw their (freeze) black billions Dollars from Abroad,they are rejects from black listed,the sanction has been lifted,that's all. The whole World was cheated by them.Shameful Europe continent,U.S.,Britain,and Japan.All the world leaders crazy rushed into Burma.Others are all the same. Only land and houses prices go sky high,the majority of citizen getting much poorer.Than Shwe is still giving his idea from the curtain,so what is change in Burma???